Okwu na ọnọdụ - Element Society
kweere na ndị na-eto eto na-enweta ihe a na-apụghị ikweta ekweta
Jikọọ na Element Team
Map nke Sheffield Youth Charities
Ntinye aka anyị na NCS
Debanye maka NCS
Kwado Ọrụ Anyị
Iji weebụsaịtị anyị
Biko gụọ okwu na ọnọdụ ndị a nke ọma ka ha na-achịkwa iji ojiji weebụ a. Ojiji nke saịtị a bụ nnakwere nke Usoro na Ọnọdụ ndị a, nke na-emetụta site na ụbọchị nke mbido mbụ gị na saịtị ahụ. Ọ bụrụ na anaghị anabata Usoro na Ọnọdụ a, biko kwụsị ọrụ nke saịtị a ozugbo. Ị kwenyere iji saịtị a naanị maka nzube ezighi ezi, na n'ụzọ nke na-adịghị emebi ikike nke onye ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ gbochi ma ọ bụ gbochie ha iji na obi ụtọ nke saịtị a.
A na-enye weebụsaịtị a na ihe ọmụma ya na 'dị ka' ndabere na enweghị ikikere nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụ ekwupụta ma ọ bụ gosi. Ojiji nke weebụsaịtị a na ihe omuma ya bu kpamkpam n'ihe ize ndụ nke onye ọrụ. Ọ dịghị ihe ga-eme ka Element Society bụrụ ihe ruru eru maka ihe ọ bụla mebiri ọ bụla na-esi na ma ọ bụ metụtara na ebe nrụọrụ weebụ a. Nchịkọta gị na naanị maka enweghị afọ ojuju na weebụsaịtị a na / ma ọ bụ ozi dị is ịkwụsị iji saịtị na ozi ahụ.
Element Society anaghị akwado na ọrụ ndị dị na saịtị a ga-egbochi ma ọ bụ ezighi ezi, ma ọ bụ na a ga-edozi ntụpọ ahụ.
Nchedo nje virus, hacking na mmejọ ndị ọzọ
Anyị na-eme mgbalị niile iji lelee ma nwalee ihe onwunwe n'oge ọ bụla nke mmepụta, Otú ọ dị ị ghaghị itinye nlezianya gị iji jide n'aka na usoro ị na-eji maka ịnweta weebụsaịtị a anaghị eme ka ị hụ ihe ize ndụ nke nje virus, koodu kọmputa ọjọọ ma ọ bụ ụdị mmechi nke ọzọ nke nwere ike imebi usoro kọmputa gị.
Anyị enweghị ike ịnakwere ọrụ ọ bụla maka ọnwụ, nkwụsị ma ọ bụ mebie data gị ma ọ bụ usoro kọmputa gị nke nwere ike ịme mgbe ị na-eji ihe onwunwe sitere na weebụsaịtị a. Ị gaghị eji saịtị anyị eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi site na ịmebata nje virus, trojans, ikpuru, ihe ndi ozo nke bu obi ojoo. Ị ga-anwa ịnweta ohere n'enweghị ikike na saịtị anyị, ihe nkesa nke echekwara na saịtị anyị ma ọ bụ ihe nkesa ọ bụla, kọmputa ma ọ bụ nchekwa data jikọọ na saịtị anyị. Ekwesighi ịbuso ebe anyi agha site na agha aghaghi agha ma obu nkesa agha nke ndi ajuju.
Site na imebi ndokwa a, ị ga-eme ihe omempụ n'okpuru Usoro Ntugharị Kọmputa nke 1990. Anyị ga-akọ akụkọ ọ bụla dị otú ahụ na ndị ọrụ mmanye iwu ahụ dị mkpa na anyị ga-ejikọ aka na ndị nwe obodo site na igosipụta ha.
Ozi gbasara gị
Anyị agaghị agafe nkọwa ị nyere anyị na onye ọ bụla ọzọ karịa nke akọwapụtara na iwu nzuzo anyị.
Eziokwu nke ozi
Ebe ọ bụ na emeela mgbalị niile dị mkpa iji hụ na ezi ọdịnaya dị, enweghị ọrụ ọ bụla nwere ike ịme maka njehie ma ọ bụ nkwụsị.
Ka anyị na-agbasi mbọ ike iji webata weebụsaịtị Element Society ruo n'oge, anyị anaghị enye ọnye ọ bụla, ọnọdụ ma ọ bụ ikike iji kwado eziokwu nke ozi ahụ na saịtị ahụ. Anyị anaghị anakwere ụgwọ maka ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke ndị ọrụ nke weebụsaịtị, ma ọ bụ kpọmkwem, na-enweghị isi ma ọ bụ na-aba uru, ma ọ kpatara site na mmebi iwu, nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ.
Nke a na-agụnye ọnwụ nke: ego ma ọ bụ ụgwọ ọrụ, azụmahịa, uru ma ọ bụ nkwekọrịta, atụmanya echekwa, data, mmesapụ aka, ihe onwunwe ma ọ bụ njedebe njikwa ma ọ bụ oge ọrụ na njikọ anyị na saịtị ma ọ bụ n'ihe metụtara iji, enweghị ike iji, ma ọ bụ nsonaazụ eji saịtị anyị, ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla metụtara ya na ihe ọ bụla e tinyere na ya. Ọnọdụ a agaghị egbochi azọrọ maka ọnwụ ma ọ bụ mebiri akụ gị nwere ike ịhụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị na-ekwu maka ego efu efu nke na-adịghị ewepụ site na nke ọ bụla nke edemede e depụtara n'elu.
Nke a anaghị emetụta ihe anyị nwere maka ọnwụ ma ọ bụ mmerụ onwe anyị site na nleghara anya anyị, ma ọ bụ ọrụ anyị maka ịgha ụgha ma ọ bụ na-ezighị ezi banyere ihe dị mkpa, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ a na-apụghị ịhapụ ma ọ bụ ejedebe n'okpuru iwu dị mkpa.
Anyị na-anabata ma gbaa ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ ume iji jikọọ na ozi a nabatara na ibe ndị a, na ị gaghị arịọ ikikere iji jikọta elementsociety.co.uk.
Otú ọ dị, anyị anaghị enye gị ikikere iji gosi na gị na Element Society kwadoro weebụsaịtị gị.
Element Society anaghị anabata ihe ọ bụla n'elu ọdịnaya nke saịtị ndị ọzọ a. Ịdị adị nke njikọ ndị a abụghị ihe nkwado nke weebụsaịtị, ma ọ bụ echiche ndị e gosipụtara na ha. Njikọ gị na saịtị ndị a bụ ihe ize ndụ gị.
Ntụleghachi na usoro ndị a
Element Society nwere ike ịmegharịa Usoro na Ọnọdụ a n'oge ọ bụla, ma kwenye na ị ga-enyocha ha ugboro ugboro. Ọ bụrụ na ịchọtagharịghị gị, ị kwenyere ịkwụsị ịnweta saịtị a ozugbo.
Copyright, ụghalaahịa na ikike nke ikike ọgụgụ isi
Enweghị akụkụ nke weebụsaịtị a, gụnyere ozi, ihe oyiyi, logos, foto, na njirimara nke saịtị ahụ, nwere ike depụtaghachi, republished, mgbasa ozi ma ọ bụ bipụtagharị n'ụdị ọ bụla ma ọ bụrụ na o nweghi ikike ederede nke ndị nwere ikikere ma ọ bụghị maka onwe gị, ma ọ bụ na-abụghị nke azụmahịa.
Ndị iwu na ọnọdụ a ga-achịkwa iwu nke England na Wales. Ụlọikpe dị na England na Wales ga-enwe ikike maka nsogbu ọ bụla nwere ike ịda.
Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-ekpebisi ike ịbụ iwu na-akwadoghị, na-adịghị mma ma ọ bụ na-enweghị ike ịnweta ya n'ihi ụda ma ọ bụ obodo ọ bụla nke a na-ezube iwu ndị a dị irè, wee ruo n'ókè na n'ime ya na Iwu ahụ akwadoghị, , a ga-ehichapụ ya ma wepụ ya na Usoro ndị a na ihe fọdụrụnụ ga-adịgide ndụ, nọgide na-arụ ọrụ zuru oke ma na-arụ ọrụ ma nọgide na-ejide ma na-akwado ya.
© 2019 Ikike niile echekwala.